Myanmar Latest News – Page 2
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားတာ ၅ လပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ ကြယ်စင်လေးကို ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့ ပြည်သူများ
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ(၃)ရက်နေ့မှာကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့မန္တလေးကသူရဲကောင်မလေးကြယ်စင်(ခ)တိန့်ကျားရှီကိုပြည်သူလူထုကြီးကသတိတရရှိနေဆဲပါပဲ။ဒီနေ့သြဂုတ်လ(၃)ရက်နေ့ဟာတော့သူမကျဆုံးခဲ့တာ (၅)လတိတိပြည့်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းသိက္ခာရှိရှိကျဆုံးသွားခဲ့တာမို့ ပြည်သူတွေဟာသူမရဲ့သေဆုံးမှုအတွက်နှမြောတသဖြစ်ရသလိုဂုဏ်လည်းယူနေကြပါတယ်။အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူဟာတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့်ကြယ်စင်ရဲ့ဖခင်ဟာကျဆုံးသွားတဲ့သမီးလေးအတွက်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သမီးလေးကျဆုံးခဲ့စဉ်ကမေတ္တာကြေးတွေလာရောက်ပေးကမ်းကြတာရှိပေမယ့်ဒီငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အားလုံးပြန်လည်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ (၁၉)နှစ်အရွယ်မိန်းမငယ်လေးဟာသတ္တိအပြည့်နဲ့ယုံကြည်ရာအတွက်အသက်စွန့်သွားခဲ့တာတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ yသူမကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုတခြားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေမပျောက်စေဖို့စွမ်းစွမ်းတမံတိုက်ပွဲဝင်ရင်းသိက္ခာရှိရှိကျဆုံးခဲ့ရတာပါ။အချိန်တွေဘယ်လောက်ပဲကြာသွားပါစေသူမကျဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းပြည်သူလူထုကြီးကသတိတရနဲ့လွမ်းဆွတ်နေဦးမှာပါ။အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှ ပျောက်ဆုံးမသွားသလိုအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းဟာလည်းဘယ်တော့မှမတိမ်ကောသွားပါဘူး။ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ဟာကဗျည်းတင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတိုင်းလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘဝတွေမှာအေးချမ်းသာယာရှိနေပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါတယ်။ Crd…M. M. H Zawgyiပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ(၃)ရက်နေ့မှာကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့မန္တလေးကသူရဲကောင်မလေးကြယ်စင်(ခ)တိန့်ကျားရှီကိုပြည်သူလူထုကြီးကသတိတရရှိနေဆဲပါပဲ။ဒီနေ့သြဂုတ်လ(၃)ရက်နေ့ဟာတော့သူမကျဆုံးခဲ့တာ(၅)လတိတိပြည့်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းသိက္ခာရှိရှိကျဆုံးသွားခဲ့တာမို့ ပြည်သူတွေဟာသူမရဲ့သေဆုံးမှုအတွက်နှမြောတသဖြစ်ရသလိုဂုဏ်လည်းယူနေကြပါတယ်။အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူဟာတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့်ကြယ်စင်ရဲ့ဖခင်ဟာကျဆုံးသွားတဲ့သမီးလေးအတွက်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သမီးလေးကျဆုံးခဲ့စဉ်ကမေတ္တာကြေးတွေလာရောက်ပေးကမ်းကြတာရှိပေမယ့်ဒီငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အားလုံးပြန်လည်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ (၁၉)နှစ်အရွယ်မိန်းမငယ်လေးဟာသတ္တိအပြည့်နဲ့ယုံကြည်ရာအတွက်အသက်စွန့်သွားခဲ့တာတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းလွန်းပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုတခြားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေမပျောက်စေဖို့စွမ်းစွမ်းတမံတိုက်ပွဲဝင်ရင်းသိက္ခာရှိရှိကျဆုံးခဲ့ရတာပါ။အချိန်တွေဘယ်လောက်ပဲကြာသွားပါစေသူမကျဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းပြည်သူလူထုကြီးကသတိတရနဲ့လွမ်းဆွတ်နေဦးမှာပါ။ အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်ဆုံးမသွားသလိုအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းဟာလည်းဘယ်တော့မှမတိမ်ကောသွားပါဘူး။ပြည်သူအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ဟာကဗျည်းတင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတိုင်းလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘဝတွေမှာအေးချမ်းသာယာရှိနေပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါတယ်။ Credit…M. M. H
သမ္မတရာထူးကို စိတ်မဝင်စားတော့တဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အကြံ
August 3, 2021 shwe myanmarnews Comments0Comment
သမ္မတရာထူးကို စိတ်မဝင်စားတော့တဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အကြံ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဟာ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ရယ်စရာဖြစ်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းက နိုင်ငံကို နှစ်ရှည်ပလန်ဆွဲပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲက တစ်ခုပဲ။ လူအများစုက မင်းအောင်လှိုင်ကို သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်လို့ ယူဆနေကြတာက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မှန်နိုင်ပေမယ့် သူက ကျွန်တော်တို့ထက် ပါးနပ်နေတဲ့ အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အာဏာကို ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အညီ လွှဲပြောင်းရယူခဲ့တယ်လို့ တစိုက်မတ်မတ်ပြောခဲ့ပြီး အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ကောင်စီစနစ်ကို အရပ်သားဟန်ရှိတဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရ ( Caretaker Government ) အဖြစ် ၆လအတွင်း အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဗေဒင် ယတြာတွေကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်နိုင်သလို တခြားတွေးစရာတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ မအလဟာ သူ့ကိုယ်သူ အာဏာရှင်အဖြစ် အများကထင်မြင်တာကို မနှစ်မြို့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုလူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ Icon တစ်ခုဖြစ်ချင်တဲ့ရောဂါလည်းရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်က မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖယ်ဒရယ် အရေးလိုကိစ္စတွေကို သူက အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း လူအများကို ပြသချင်သေးတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လုပ်လာနိုင်တာတွေက အခြေခံဥပဒေကို လိုသလိုပြင်ဆင်ခြင်း။ PR စနစ်…
တရုတ် ပေါက်ချမ်းမှာ မြန်မာအလုပ်သမား ၈၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရပြီး အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခံနေရ …
တရုတ် ပေါက်ချမ်းမှာ မြန်မာအလုပ်သမား ၈၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရပြီး အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခံနေရ … တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန့်မှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား တရုတ်ရဲများက လမ်းတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အလုပ်ရုံတစ်ခု၌ အတင်းအဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းနေကြောင်း သိရသည်။ ဖူကျန့်မှ မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြန် ပေါက်ချမ်းဂိတ်၌ ရဲများက ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ လက်ရှိပေါက်ချမ်းနှင့် မန်ရှီကြားက လုံလီဆိုသည့် နေရာတွင် နေနေရကြောင်း သိရသည်။ “သူတို့ ပြန်တဲ့လမ်းမှာ အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လပိုင်း ၃ရက်နေ့မှာ အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ် ၁၄ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါပြန် ဆက်သွယ်လာတယ် သူတို့ကို ကွာရန်တင်း ထည့်ထားတယ် အခုမှ ထောင်ကို ပြောင်းရမှာလို့ အဲ့သတင်းကြားပြီးနောက် ဘာမှ မကြားတော့ဘူး။ မနေ့က ပြန်ဆက်သွယ်လာတာက သူတို့ကို ထောင်ကိုမပို့ပဲ စက်ရုံနှစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံက လာမခေါ်လို့ မပြန်ခိုင်းဘူးလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။”ဟု အဖမ်းခံထားရသူတစ်ဦး၏ အမျိုးသမီးက ပြောသည်။ ၎င်း၏ အမျိုးသားသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ ၃နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံရပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ အသက်ကြီးသူများ နာမကျန်းသူများကို ပြန်လွတ်ပေးပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အသက်လတ်ပိုင်းများကို…
၀မ်းစာကိုလဲ ရှာပါ… ဂုတ်သွေးစုပ် အမြန်ထုတ်ခြင်းကိုလဲ ရှောင်ပါ…
၀မ်းစာကိုလဲ ရှာပါ… ဂုတ်သွေးစုပ် အမြန်ထုတ်ခြင်းကိုလဲ ရှောင်ပါ… ဂျပန်ခေတ်တုန်းကပေါ့… ဈေးတစ်ခုထဲကိုဂျပန်စစ်သားတွေဝင်လာတယ် အဲမှာ ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ မြန်မာဈေးသည်တွေလဲ မျက်နှာမှာသွေးမရှိကြတော့ဘူးလန့်နေကြတာပေါ့… အဲ့ဒီအချိန်မှာဟင်းရွက်ကန်ဇွန်းရွက်ရောင်းတဲ့လူကို ဂျပန်ဗိုလ်ကြီးကမြန်မာစကားပြန်နဲ့မေးခိုင်းတယ်… မင်းဘာအတွက်ဈေးရောင်းနေတာလဲတဲ့… ဈေးသည်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့ ကိုယ့်ဝမ်းစာအတွက်ရောင်းနေတာပါလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်… ဂျပန်ဗိုလ်ကြီးမျက်နှာပျက်သွားပြီး ဈေးဗန်းကိုစောင့်ကန်ချလိုက်ပြီး ဈေးသည်ကိုဂျပန်ပါးရိုက်နည်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်… ဈေးသည်ကထူပူပြီးစကားပြန်ကြီးကိုမေးတယ်…ခများဘာများမှားပြောလိုက်လဲတဲ့ စကားပြန်ကြီးကလဲ ကျွန်တော်ခများပြောတဲ့အတိုင်းပဲ တိတိကျကျပြောလိုက်တာပါလို့ ပြောပါတယ်… အဲဒီမှာ ဂျပန်ဗိုလ်ကြီးက စကားပြန်ကြီးကိုပြန်ပြောခိုင်းလိုက်တယ် …မင်းဈေးရောင်းတာ မင်းတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့… အမှန်ပဲ…ဂျပန်တွေရဲ့ခံယူချက်က သူတို့ဘာလုပ်လုပ်သူတို့ဝမ်းစာအတွက်ထက် တိုင်းပြည်အတွက်အဓိကကြည့်တာ ကျွန်တော်တို့အသိဆုံးပါ… ဒီကနေ့ဒီအချိန် ဂျပန်ပစ္စည်းဆိုရင် မူလီ လေးတစ်လုံးကအစ အဟောင်းတောင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်… တရုတ်ထုတ်ပစ္စည်းအသစ်နဲ့ ဂျပန်ပစ္စည်းအဟောင်းနဲ့ဆို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဂျပန်စက်အဟောင်းကိုပဲယူဖြစ်မှာအသေချာပါ… ဂျပန်တွေကတစ်ကယ်မျိုးချစ်ကြတယ်…သူတို့လူမျိုးကိုနာမည်တစက်အပျက်မခံဘူး… ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလဲ သူတို့အုပ်ချုပ်တုန်းက စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့်နှိပ်စက်တယ်လို့မြင်ပြီးမပြင်ခဲ့ကြဘူး အခုချိန်ထိဒီအကျင့်ဆိုးကြီးတွေ လူအချို့မှာကပ်ညှိနေတယ်… ငါဈေးရောင်းတာငါ့မိသားစုချမ်းသာဖို့ အခြားလူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်ပါစေ… ခေတ်ပျက်တုန်းရှာရတာဆိုပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကပြည်သူအချင်းချင်း ဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်ကျတဲ့ လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်… ကိုဗစ်စဖြစ်တော့ Mask. တွေဈေးတင်ရောင်းတယ်… နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီး အပြန်ကားငှားရခက်တော့ ကားခတွေမတရားတိုးတောင်း … (မှတ်ချက်ပရဟိတ Taxi. ဆရာအများအပြားလဲရှိပါတယ်) အချို့မတရားတောင်းခဲ့တဲ့ကားသမားတွေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အခုကိုဗစ်တတိယလှိုင်းက အရမ်းကြမ်းတယ်…အများပြည်သူတွေကူရာမဲ့နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဆေးဆိုင်တွေဈေးတင်ရောင်းကြတယ်… အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်လာမှန်းသိတော့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဈေးတွေမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးသွားတယ်… မဝယ်နိုင်လို့ အောက်ဆီဂျင်မရှုရပဲ သေသွားတဲ့လူတွေအများကြီး… ကျွန်တော်ပြောချင်တာ လှူခိုင်းနေတာလဲမဟုတ်ဘူး…
ဝါရင့် ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးစံမတူ ကွယ်လွန်…
ဝါရင့် ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးစံမတူ ကွယ်လွန်… မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကတွင် ပရိတ်သတ်ကို ဟာဒယ စိတ်နှလုံး ရွင်ပြုံးအောင် ဖျာ်ဖြေမှု ပေးခဲ့သည့် ဂျော်လီဆွေ၊ သော်တာ၊ ပလာတာ၊ စံမတူ ဆိုသည့် ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီးများအနက် နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဝါရင့်ဟာသ သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးစံမတူ(အသက် ၉၀နှစ်) ယနေ့မနက်ပိုင်းက လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရသည်။ ဟာသရုပ်ဆောင် ဦးစံမတူသည် ဇတ်သဘင် လူရွှင်တော်အဖြစ်မှ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်သူ ကူးပြောင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးပလာတာမှာ ယမန်နှစ် ကိုဗစ်ကာလတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီး ၊ ဦးဂျော်လီဆွေမှာ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဝါရင့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီး ဦးစံမတူ ကြယ္လြန္… ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ပရိတ္သတ္ကို ဟာဒယ စိတ္ႏွလုံး ႐ြင္ၿပဳံးေအာင္ ဖ်ာ္ေျဖမႈ ေပးခဲ့သည့္ ေဂ်ာ္လီေဆြ၊ ေသာ္တာ၊ ပလာတာ၊ စံမတူ ဆိုသည့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီးမ်ားအနက္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ ဝါရင့္ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီး ဦးစံမတူ(အသက္ ၉၀ႏွစ္) ယေန႔မနက္ပိုင္းက လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ဟာသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးစံမတူသည္ ဇတ္သဘင္ လူ႐ႊင္ေတာ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္ရွင္နယ္ပယ္သူ ကူးေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း…
စစ်တပ်ကKIAကိုအပစ်ရပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကောလဟလလည်းတက်လာရော ညီကိုဗမာများရဲ့စိုးရိမ်သံတွေအများကြီးကြားရပါတယ် မြင်ရပါတယ်။ ကျနော်မြင်သလောက်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် KIO/KIAဟာပြည်သူနောက်ပဲလိုက်နေတာပါ။KIO/KIAသည်ပြည်သူနှင့်အတူလွတ်မြောက်လိုပြီး ပြည်သူ့တပ်မတော်စစ်စစ် စတန်းဒတ်အာမီစစ်စစ်ဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒီတော့ KIO/KIAအပစ်ရပ်ခြင်း မရပ်ခြင်းကပြည်သူမှာပဲမူတည်ပါတယ်။ ကျနော်ပြည်သူတွေ တကယ်ရောလွတ်မြောက်လိုပါရဲ့လား? မေးခွန်းထုတ်ဆန်းစစ်ရမဲ့အချိန်ပါ။ကျနော်အနေနဲ့တော့ တော်လှန်ရေးကိုအားမရလာတော့ပါဘူး …ဖေဘုတ်သုံးခြင်းသည်လူတိုင်း၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ် ကန့်သတ်ပြီးမပြောလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးတာကိုခွဲခြားနိုင်ရမဲ့အချိန်ပါ။ မနေ့ညက အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့liveမှာကြည့်ရှု့သူ၃သိန်းကျော်နဲ့လူစည်ကားနေတာဟာ တော်လှန်ရေးကိုပြက်ရယ်ပြုရာကျပါတယ်။ ကိုဗစ်လည်းပြီးအဲ့အမျိုးသမီးလည်းတဖန်liveလွင့်ပြလိုက်ရင် မြန်မာနိူင်ငံဟာငြိပ်ဝပ်ပိပြားနေသားကျသွားမဲ့အခြေအနေပါ။ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုကြည့်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာကျနော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်ရစေတာပါ။ အပျော်ပါလို့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပါလို့ နှင့်သိမ့်မယူပါနဲ့ အချိန်အခါရှိပါတယ်။ စာရေးသူကျနော်ဟာလည်းအဲလောက်ထိကပ်တီးကပ်သပ်လိုက်အပြစ်မြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး.. US လေယာဉ်သဘော တွေမှာ ဟတ်စကီးနဲ့ ကောင်မလေးတွေဆင်းပြီးဖျော်ဖြေတာတွေတွေ့ဖူးမှာပါ။ တချိန် ချိန်တော့ အဲလိုကာလလည်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်။ခုကအချိန်မဟုတ်သေးဘူးလေ ခုချိန် ရန်ကုန် ၊မန္တလေး က PDFအဖွဲ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြိုခွင်းခံနေရပါတယ်ါ ဖမ်းဆီးခံနေရပါပြီ။ ကျနော်အမြင်အရ အဲဒီကိစ္စရပ်တွေဟာ ပြည်သူအယောက်စီတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်မူအားနည်းလို့ဖြစ်ကြရတာပါ။ပြည်သူတွေအားစိုက်ရမဲ့နေရာ အာရုံစိုက်ရမဲ့နေရာတွေမှာအားမစိုက်လို့ဖြစ်ကြရတာပါ။ နောက်ပြီးတစ်ခုမြင်ပါတယ်… ဒလန်/သတင်းပေးအလွန်များပြားနေပါတယ် သတင်းပေးအားကစစ်တပ်ဖက်ကိုအလွန်အားသာနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအိပ်ပျော်နိုင်လွန်းတယ်ဗျာ တချို့အွန်လိုင်းဆယ်လီတွေ လိုရင်းကိုမရောက်နိူင်ဘူး ဆဲမယ် ထေ့ငေါ့မယ် မုန့်ဟင်းခါးခေါင်းစဉ်ရှာပေးယုံနဲ့တော်လှန်ရေးဟာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့မြေပြင်ဘဝကိုမြင်ဖို့လိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးဟာကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ချွေးထွက်မှရပါမယ်။အသက်ပေးမှရပါမယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှလာပြီးတိုက်ပြီးရော့…အင့်…မင်းတို့ပြည်သူ့အာဏာ..လုပ်မပေးပါဘူး။ NUGနဲ့EAOS တွေပိုပြီးအယုံအကြည်ရှိလာဖို့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးရပါမယ် စည်းရုံးနေရပါမယ်။ Followerသိန်းဂဏန်းသန်းဂဏန်းရှိသူများဟာအဲဒီအရာတွေကိုတောက်လျှောက်မီးမောင်းထိုးပြရပါမယ် ပြည်မနဲ့တောင်တန်းချစ်ကြည်ရေးကိုဇောင်းပေးရေးသားစည်းရုံးနေရမှာပါ။ အခုကမရေးတဲ့အပြင် တချို့တွေ သတင်းပေးများလုပ်နေသလားလို့တောင်ထင်မိပါတယ်။ မန်းလေးကိစ္စ ခုရန်ကုန်ကိစ္စ တွေ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကPDFကိစ္စရပ်များဟာ အွန်လိုင်းဆယ်လီတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနောက် ဖြိုခွင်းခံရတာလားလို့မြင်မိပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေက ဥပမာတခုပြောမယ်ဗျာ အမေရိကန် CIAပဲထားပါတော့ ယိုးဒယားလိုနယ်စပ်မှာအထိုင်ချပြီး ကဲမင်းတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုငါတို့လက်နက်ကူညီမယ် လာယူကြဆိုရင်တောင်…..